IVeki ye-Intanethi iGuyana iqhubela phambili i-ajenda yophuhliso lwetekhnoloji yeCaribbean
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeManyano » IVeki ye-Intanethi iGuyana iqhubela phambili i-ajenda yophuhliso lwetekhnoloji yeCaribbean
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba eziziiGuyana • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • Technology • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Oktobha 16, 2017
Ehlabathini lonke, ukusebenza kwabaphuli-mthetho kwi-intanethi kukugqitha kakhulu ukuntsokotha kwezakhelo zowiso-mthetho zesizwe. Oorhulumente bajongene noxinzelelo rhoqo lokuvavanya izoyikiso ze-cyber zehlabathi kunye nokwenza iindlela ezifanelekileyo zokhuseleko lwasekhaya.
Ngaphesheya kweCaribbean, oorhulumente bakha ubuhlakani bobuchule kunye nabadlali bengingqi njengeQela leCaribbean Network Operators Group (i-CaribbeanNOG) kunye neCaribbean Telecommunications Union (CTU). ICaribNOG ngoyena mmandla mkhulu wamavolontiya asekwe kwingingqi yeenjineli zenethiwekhi, iingcali zokhuseleko lweekhompyuter kunye neeteknoloji aficionados.
Kutshanje, i-CaribbeanNOG kunye ne-CTU babephakathi kwabaququzeleli be-Intanethi yeVeki yaseGuyana, inkomfa yeentsuku ezintlanu yezobuchwephesha eyayibanjwe liCandelo loMphathiswa Wezonxibelelwano kaRhulumente waseGuyana, ngokusebenzisana nemibutho yamazwe aphesheya njenge-Intanethi yoMbutho, i-Intanethi ye-Intanethi yamagama abelweyo kunye namanani (ICANN ), IRegistry yaseMelika yeNombolo ye-Intanethi (i-ARIN), kunye neLatin America kunye neCaribbean yeeDilesi zeRejista (i-LACNIC).
UCatherine Hughes, uMphathiswa wokuqala wezoNxibelelwano zikaRhulumente eGuyana, uthe umsitho weentsuku ezintlanu uyinxalenye ye-ajenda yesizwe yokwakha ubuchwephesha belizwe kukhuseleko lwe-cyber nakwezinye iindawo eziphambili.
"Sikhuthaza oorhulumente baseCaribbean ukuba baphuhlise ii-ajenda zomthetho kwaye bandise intsebenziswano engaphakathi kwengingqi, ukuze someleze amandla okuphela kokhuseleko lommandla," utshilo uKevon Swift, iNtloko yezoBudlelwane noBuchule kunye nokuHlanganisa kwi-LACNIC.
“Njengabenzi bemithetho, oorhulumente badlala indima ebalulekileyo ekuphenduleni kwengingqi kwimingeni yezokhuseleko kwi-intanethi. Kodwa abanakho ukwenza umsebenzi wabo bebodwa, utshilo uBevil Wooding, Umphathi wokufikelela kwiCaribbean eAmerican Registry for Internet Numbers (ARIN), nomnye wabasunguli beCaribNOG.
Icandelo labucala, ukunyanzeliswa komthetho, ezomthetho kunye noluntu ngokubanzi banoxanduva lokuqinisekisa ukuba abemi bommandla kunye namashishini akhuselekile kwaye akhuselekile. ”
Kule veki iphela, abameli abavela kwimibutho ethathe inxaxheba bakwabonisa iindlela ezisebenzayo abanokuthi basebenzisane ngazo ukomeleza kunye nokukhusela uthungelwano lweCaribbean.
UStephen Lee, omnye umsunguli weCaribNOG, uguqule imiba yezokhuseleko kwilizwe liphela kwiCaribbean, echaza eminye yemiceli mngeni kunye namathuba okubaluleka okukhethekileyo kulo mmandla.
U-Albert Daniels, uManejala oPhezulu wokuzibandakanya kwabathathi-nxaxheba kwiCaribbean e-ICANN, uchaze umsebenzi wombutho wokuxhasa ukuthunyelwa kwenethiwekhi ekhuselekileyo kwihlabathi liphela.
UShernon Osepa, uManejala, Imicimbi yeNgingqi yeLatin America kunye neCaribbean kwi-Internet Society, wayekhona ukusungula ngokusesikweni i-Intanethi yoMbutho weGuyana, kunye noNancy Quiros, uManejala woPhuhliso lweSahluko kwiLatin America naseCaribbean kwi-Intanethi, kunye U-Lance Hinds, uMcebisi okhethekileyo kuMphathiswa, obesebenza njengoMongameli weThutyana wesahluko.
Kodwa yayiyindibano yolutsha, eyayibanjwe yi-CTU ngomhla wokuvala wenkomfa, eyabeka uphawu lwesikhuzo kwiveki enempembelelo enkulu. Malunga ne-400 yabafundi abavela kwizikolo eziziisekondari ezininzi abathathe inxaxheba kwi-ajenda yemihla ngemihla, eyayigcwele iividiyo, iintetho ezisebenzisanayo kunye neeseshoni ze-Q & A, zonke ziyilelwe ukuqaqambisa iingozi ezibonakalayo zokuziphatha okungakhuselekanga kwi-Intanethi.
“I-CTU iyaqhubeka nokuxhasa uphuhliso lwecandelo leTekhnoloji yoLwazi kunye noNxibelelwano (ICT) kwingingqi kubandakanya ugxininiso ekusebenziseni amandla olutsha. Kukho iinzame ezidibeneyo zokufumana ulutsha lubandakanyeke ngakumbi kwaye lubenze bazi ngemiba ye-ICT ebachaphazelayo, bahlakulele ingqondo yentsha kunye noshishino, kwaye babafundise ngendlela yokusebenzisa ngokufanelekileyo amandla etekhnoloji alele ezandleni zabo, ”Utshilo uMichelle Garcia, uNgcali woNxibelelwano e-CTU.
Impumelelo yosuku yayibonakala kakhulu emva kwayo. Nditsho nasemva kokuvalwa ngokusesikweni, i-buzz ebonakalayo yahlala kwigumbi lokuhlangana, nenqwaba yabafundi bahlala emva ukuzazisa kwiingcali zeepaneli, uninzi lwabo luthatha ithuba lokubakhuthaza ngemibuzo elandelayo emacaleni.
Ngazo zonke iingxelo, le Veki ye-Intanethi iyakonyusa iinzame zeGuyana zokufezekisa isithembiso esitshixelwe kweso sizukulwana seenkokheli zengingqi zexesha elizayo. Ngoku umsebenzi wokwenyani kufuneka uqhubeke, ukuze kuguqulwe amandla eCaribbean abe yinyani yeCaribbean.
I-Alaska Airlines ikhupha iSan Francisco Giants-themed ...
Iplane yabahambi uSkyward Express yaphazamiseka eKenya
Igunya lokuhambisa imas laseMelika ukuba landiswe phakathi ...
Iinqwelo moya zaseIndiya zamanye amazwe: ukunqunyanyiswa okwandisiweyo ...
I-Koh Samui yaseThailand iyayekisa imigaqo yokungena ...
IAeroflot irhoxisa zonke iinqwelomoya zase Bangkok ngenxa yengozi e ...
Inqwelomoya yaseBelavia ngenjini engaphumelelanga yenza imeko engxamisekileyo ...
I-arhente zokuhamba ziqhankqalaza: Umphathiswa Wezokhenketho e-Itali ...
Ukuhamba kwabahambi kwizikhululo zeenqwelomoya eziphambili eIreland ukuya kuma-230%
Ezokhenketho iTrinidad yokuvuselela amandla kunye noMntu oMtsha ophetheyo
I-Seychelles yamkela ukuphumla koThintelo lohambo ...